အကောင်းဆုံး HZS60 ကွန်ကရစ်ရောစပ်စက်ရုံ ထုတ်လုပ်သူနှင့် စက်ရုံ |Macpex
HZS60 ကွန်ကရစ်ရောစပ်စက်ရုံ၏ စက်တစ်ခုလုံးသည် စက်နှစ်လုံးပြောင်းသောအခါတွင် လွှမ်းမိုးမှုမရှိဘဲ စနစ်၏ စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်မှုထိန်းချုပ်မှုကို အလိုအလျောက်သေချာပေးနိုင်သည့် နှစ်ထပ်ကွန်ပြူတာထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကို လက်ခံပါသည်။Dynamic panel display သည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ရှင်းလင်းစွာ နားလည်နိုင်သည်။အလိုလိုသိမြင်နိုင်သောစောင့်ကြည့်ရေးအင်တာဖေ့စ်သည် ဆိုက်အတွင်းအလုပ်စီးဆင်းမှုကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့် တိကျစွာစောင့်ကြည့်နိုင်သည်။အစီရင်ခံစာပုံနှိပ်ခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှုကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
HZS60 ကွန်ကရစ်ရောစပ်စက်ရုံသည် သုတ်စက်၊ အစုလိုက်ပို့ဆောင်သည့်ကိရိယာ၊ အမှုန့်သယ်ဆောင်သည့်ကိရိယာ၊ ရေပေးဝေမှုနှင့် ပေါင်းထည့်မှုစနစ်၊ မီတာတိုင်းတာမှုစနစ်၊ ရောစပ်စနစ်၊ လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့် လေထိန်းချုပ်မှုစနစ်တို့ပါ၀င်သည့် အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ကွန်ကရစ်ရောစပ်စက်ရုံဖြစ်သည်။HZS60 ကွန်ကရစ်ရောစပ်စက်ရုံသည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဖွဲ့စည်းပုံ၊ ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောလည်ပတ်မှု၊ အဆင်ပြေသောလည်ပတ်မှုနှင့် တိကျသောတိုင်းတာမှုလက္ခဏာများရှိသည်။လမ်းများ၊ လေဆိပ်များ၊ ဆိပ်ကမ်းများ၊ ရေအားလျှပ်စစ်နှင့် ကွန်ကရစ် ကြိုလုပ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများနှင့် လုပ်ငန်းသုံးကွန်ကရစ်ကဲ့သို့သော အကြီးစားပရောဂျက်များ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် သင့်လျော်ပါသည်။အင်ဂျင်နီယာ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။
1. Modular ဖွဲ့စည်းပုံကို လျင်မြန်စွာ တပ်ဆင်ပြီး ဖြုတ်တပ်ပြီး အဆင်ပြေသော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြင့် လက်ခံကျင့်သုံးပါသည်။၎င်းတွင် အပြင်အဆင်ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပြီး မတူညီသောဆိုက်များ၏လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါသည်။
2. main mixer သည် JS1000 double horizontal shaft forced concrete mixer ကို ကောင်းမွန်သောရောစပ်မှုအရည်အသွေးနှင့် မြင့်မားသောကုန်ထုတ်စွမ်းအားဖြင့် လက်ခံပါသည်။၎င်းသည် ခြောက်သွေ့မာကျောသော၊ semi dry hard၊ ပလပ်စတစ်နှင့် ကွန်ကရစ်၏ အချိုးအစားအမျိုးမျိုးကို စံပြအချိန်တစ်ခုအတွင်း ကောင်းမွန်စွာ ရောစပ်နိုင်သည်။
3. တိုင်းတာခြင်းဆိုင်ရာဒြပ်စင်များနှင့် တိုင်းတာခြင်းယူနစ်အားလုံး၏ ထိန်းချုပ်မှုဒြပ်စင်များသည် တိကျသောမီတာတိုင်းတာခြင်းနှင့် တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအပြည့်အဝသေချာစေရန်အတွက် မိုက်ခရိုကွန်ပြူတာမှ တင်သွင်းလာသောဒြပ်စင်များဖြစ်သည်။
4. အစာကျွေးခြင်း၊ သုတ်ခြင်း၊ တိုင်းတာခြင်းမှ အစာကျွေးခြင်းမှ ရောစပ်ခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်းအထိ အမှုန့်ပြုသောပစ္စည်းများအားလုံးကို အပိတ်အနေအထားဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါသည်။အရည်အသွေးမြင့် ဖုန်စုပ်ကိရိယာများကို ပင်မရောစပ်အဆောက်အဦတွင် အသုံးပြုသည်။ထုပ်ပိုးခြင်း၏အဓိက
ဖုန်နှင့်ဆူညံသံများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကို ကောင်းစွာလျှော့ချပေးသည့် အဆောက်အဦနှင့် ခါးပတ် conveyor တို့ကို ရောစပ်ပိတ်ထားပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကာအကွယ်ပေးစွမ်းမှု ကောင်းမွန်ပါသည်။
5. ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပိုင်းတစ်ခုစီတွင် ပလပ်ဖောင်းတစ်ခု သို့မဟုတ် လှေကားတစ်ခုစီကို တပ်ဆင်ထားပြီး ပင်မအင်ဂျင်တွင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်သော ဖိအားမြင့်ပန့်သန့်စင်စက်ကို တပ်ဆင်ထားပါသည်။
6. စက်တစ်ခုလုံးသည် dual computer control system ကိုလက်ခံရရှိသည်၊ ၎င်းသည် dual computer ကိုပြောင်းသည့်အခါစနစ်၏အဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်မှုထိန်းချုပ်မှုကိုအလိုလိုသေချာစေနိုင်သည်။Dynamic panel display သည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ရှင်းလင်းစွာ နားလည်နိုင်သည်။အလိုလိုသိမြင်နိုင်သောစောင့်ကြည့်ရေးအင်တာဖေ့စ်သည် ဆိုက်အတွင်းအလုပ်စီးဆင်းမှုကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့် တိကျစွာစောင့်ကြည့်နိုင်သည်။အစီရင်ခံစာပုံနှိပ်ခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှုကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
7. အီလက်ထရွန်းနစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ် အစိတ်အပိုင်းများသည် တည်ငြိမ်သောအလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အားကောင်းသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့် တင်သွင်းလာသော အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ပုံမှန်မဟုတ်သော လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများနှင့် အမှားအယွင်းများကို အလိုအလျောက် ထောက်လှမ်းခြင်းသည် ပြဿနာဖြေရှင်းရာတွင် လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် စာသား၊ အသံ၊ အလင်းနှင့် အချက်ပေးအချက်ပြမှုကို လက်ခံပါသည်။
● အမည်ခံအထွက်- 60 m³/h
● Mixer အားသွင်းခြင်း-1.0 m³
● Batching စက်- PLD2400-III
● စုစည်းသိုလှောင်မှုပုံးများ အားသွင်းခြင်း-15 m³
● စုစည်းသိုလှောင်မှုပုံး ပမာဏ-၃ pc
● စုစုပေါင်းအလေးချိန်: 4000 ကီလိုဂရမ်
● ဘိလပ်မြေအလေးချိန်: 1000 ကီလိုဂရမ်
● ပြာမှုန်များ အလေးချိန် ပမာဏ:/
● ရေအလေးချိန်: 400 ကီလိုဂရမ်
● ပေါင်းထည့်နိုင်မှု အလေးချိန်-၄၀ ကီလိုဂရမ်
● Mixer ပါဝါ:45 kW
● Belt conveyor ပါဝါ: 18.5 kW
● စုစုပေါင်း ဓာတ်အား: 90 kW
● Mixer စွန့်ထုတ်မှု အမြင့်: 3.8 မီတာ
● စုစုပေါင်းအလေးချိန်: 24 t
● ကောက်ကြောင်းအတိုင်းအတာ (L x W x H) : 28.1 mx 11 mx 19.2 m
နောက်တစ်ခု: Dry Batch Concrete Plant